DOWNLOAD NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA MAKA HP LASERJET PRO 400 M401DN - NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA - 2019
Ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala maka HP LaserJet PRO 400 M401DN nbipute
Ogoro onye ọ bụla mara ọrụ maara na ka usoro ahụ wee rụọ ọrụ siri ike na ngwa ngwa, ịkwesiri nlekọta kwesịrị ekwesị maka ya. Ọfọn, ma ọ bụrụ na ịghị etinye ihe n'usoro, n'oge na-adịghị anya, njehie dịgasị iche ga-apụta, ọrụ ahụ n'ozuzu ya agaghị adị ngwa ngwa dị ka ọ dị. Na nkuzi a, anyị ga-ele otu n'ime ụzọ ndị ị ga-esi nweta Windows 10 azụ ọrụ.
Iji mee ka ọsọ ọsọ nke kọmputa ahụ nwee ike iji ngwá ọrụ mara mma akpọrọ TuneUp Utilities.
Ọ nwere ihe niile ịchọrọ maka nlekọta oge ọbụla ọ bụghị naanị. Ọzọkwa, otu ihe dị mkpa bụ ọnụnọ nke ndị ọkachamara na ndụmọdụ ndị ga-enyere gị aka ịmalite ngwa ngwa ma kwado usoro nke ndị ọrụ novice. Na mgbakwunye na kọmputa desktọọpụ, a pụkwara iji usoro a rụọ ọrụ ngwa ngwa nke laptọọpụ Windows.
Anyị na-amalite, dị ka ọ dị na mbụ, na usoro mmemme.
Ịwụnye TuneUp Utilities
Iji wụnye TuneUp Utilities ọ ga-ewe dị ka di na nwunye clicks na obere ntachi obi.
Nke mbụ, budata onye nchịkọta si na saịtị ọrụ ahụ ma mee ya.
Na nke mbụ, onye nkwụnye ahụ ga-ebudata faịlụ ndị dị mkpa na kọmpụta ma malitezie nwụnye.
N'ebe a, ị ga-ahọrọ asụsụ ma pịa bọtịnụ "Next".
N'ezie, nke a bụ ebe ọrụ onye ọrụ ahụ kwụsịrị, ọ na-anọgidekwa na-echere ka echichi ahụ mezue.
Ozugbo arụnyere usoro ahụ na usoro, ị nwere ike ịmalite ịgụ isiokwu.
Mgbe ị na-agba ọsọ TuneUp Utilities, usoro ihe a ga-enyocha sistemụ arụmọrụ ma gosipụta nsonaazụ ahụ na windo ahụ. Na-esote, pịa otu bọtịnụ otu ọrụ dị iche iche.
Nke mbụ, usoro ihe omume ahụ na-enye gị ịhazi nhazi.
Na usoro a, TuneUp Utilities ga-enyocha ndekọ maka njikọ na-ezighị ezi, chọta ụzọ mkpirisi efu, diskgment disks na-ebuli ọsọ nke na-ebuchi ma na-emechi ala.
Ihe ọzọ ị ga - eme bụ ime ngwa ngwa.
Iji mee nke a, pịa bọtịnụ kwekọrọ na window nke TuneUp Utilities wee soro ntuziaka ọkachamara ahụ.
Ọ bụrụ na ịmebeghị usoro nhazi site n'oge a, ọkachamara ga-agwa gị ka ịme nke a.
Mgbe ahụ i nwere ike gbanyụọ ọrụ ndabere na mmemme, yana ịmepụta ngwa ngwa.
Ma na njedebe nke omume nile na nke a, TuneUp Utilities na-enye gị ohere ịhazi ọnọdụ turbo.
Debe ohere disk
Ọ bụrụ na ịnwụla ohere disk ohere, ị nwere ike iji ọrụ nke ịhapụ ohere disk.
Ọ dịkwa mkpa iji njirimara a maka usoro disk, ebe ọ bụ na sistemụ chọrọ ọtụtụ gigabytes nke ohere ohere.
Ya mere, ọ bụrụ na ịmalite inwe ụdị njehie dị iche iche, malite site n'ịlele ohere n'efu na diski disk.
Dị ka ọ dị na mbụ, enwekwara ọkachamara n'ebe a na-eduzi onye ọrụ site na nhichapụ ntụpọ.
Na mgbakwunye, ọrụ ndị ọzọ dị na ala nke windo iji nyere aka wepu faịlụ ndị na-adịghị mkpa.
Akụkụ ọzọ dị egwu nke TuneUp Utilities bụ nchọpụta nsogbu usoro.
N'ebe a, onye ọrụ nwere nnukwu ngalaba atọ, nke ọ bụla na-enye ngwọta ya maka nsogbu ahụ.
N'ebe a, TuneUp Utilities ga-aza ajụjụ iji dozie nsogbu ndị a na-ahụ site na omume omume. Ọzọkwa, n'oge ọ bụla ọ ga-adị ọ bụghị naanị iji dozie nsogbu ahụ, kamakwa nkọwa nke nsogbu a n'onwe ya.
Nsogbu nsogbu nkịtị
N'akụkụ a, ị nwere ike iwepu nsogbu ndị kachasị na sistemụ arụmọrụ Windows.
Ọfọn, na "nke ọzọ," ị nwere ike ịlele diski (ma ọ bụ otu diski) maka ọnụnọ nke ụdị njehie dịgasị iche iche, ma ọ bụrụ na o kwere omume, wepụ ha.
Nwekwara ebe a na ọrụ iji weghachite faịlụ ndị ehichapụ, nke ị nwere ike iweghachị faịlụ ndị ehichapụrụ.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịrụ ọrụ ọ bụla, kwuo, lelee ndekọ ma ọ bụ hichapụ faịlụ ndị na-enweghị isi, ịnwere ike iji mpaghara "Ọrụ niile". Lee ngwaọrụ niile dị na TuneUp Utilities.
Hụkwa: mmemme iji mee ka kọmputa dị ngwa
Ya mere, site n'enyemaka nke otu usoro, anyị enweghi ike ịrụ ọrụ, kama iji wepụ faịlụ ndị na-adịghị mkpa, si otú a na-ahapụ ohere ọzọ, dozie ọtụtụ nsogbu, yana ịlele disk maka njehie.
Ọzọkwa, na usoro nke na-arụ ọrụ na sistemụ arụmọrụ Windows, a na-atụ aro ka ịme ihe nchọpụta dị otú ahụ mgbe ụfọdụ iji hụ na ị ga-arụ ọrụ na-eme n'ọdịnihu.